FMI MALAGASY: Iray volana monja, hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE FMI MALAGASY: Iray volana monja, hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy.
A LA UNEACTUALITEECONOMIEPOLITIQUE
FMI MALAGASY: Iray volana monja, hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy.
By Nirinajuil 10, 2017, 16:26 0
Hanolotra kandida ho fidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny fikambanana FMI Malagasy na Fahefa-Mividy no Ilain’ny Malagasy. Ny fanomezana fahefa-mividy ho an’ny vahoaka Malagasy amin’ny lafiny rehetra toy ny ara-tsakafo, fahasalamana, fampianarana…no angady ho entiny iatrehana izany. “Rehefa foana ny MID (Marché Interbancaire de devises), apetraka ny taha-bola tsy miovaova, miakatra ny zato isan-jato ny sandam-bola Malagasy, samy hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy”, hoy i Jean-Jacques RATSIETISON, Filohan’ny FMI.
Ny fidinan’ny vidin’ny solika ho antsasany no vokatra raha tanteraka ireo. Hidina manaraka azy ny vidin’entana. Araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra voalohany ny fikambanana hatrany, ao anatiny iray volana monja no hampiharana izany.
Tombony ho an’ny firenena Malagasy ihany koa ity fandaharan’asa ity satria ho ampiana ireo tantsaha amin’ny famokarana. Hitombo ny vokatra ka hahaleo tena ara-tsakafo. Ireo ambim-bava kosa ahondrana any mba hampidirana vola vahiny.
Previous PostMINISTERAN’NY TOEKARENA SY NY PLANINA: Ho foana ny hanoanana amin’ny 2030. Next PostORANGE: Hanatsara sehatry fifandraisana ny Smart Nosy Be sy ny « réseau 4G ».